Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uCowey Road kwaba uProblem Mkhize Road – The Ulwazi Programme
Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uCowey Road kwaba uProblem Mkhize Road
Njengba kunezinguquko ezweni lonkana sicabanga ukuthi umqondo omuhle ukuthi sibhale ngomlando omncane waseNingizimu Afrika, wakamuva nowedlule.
Akubonakali kungenzeka, kodwa cishe eminyakeni eyisikhombisa edlule lapho impi namagama emigwaqo yaseThekwini yaqala. Emizamweni yokwamukela omunye umlando waseNingizimu Afrika owawukhohlakala kaula ngesikhathi sobandlululo, amagama emigwaqo eThekwini amaningi aguqulwa ngo-2007. Izinguquko azizange zithathwe kahle, futhi kwalandela izimpi zenkantolo ezinde nezingxoxo zomphakathi. Abantu baze besula amagama amasha emigwaqo ngompende omnyama ngokuwufafaza, noma ukunamathisela amagama amadala ngaphezu kwezimpawu ezintsha ngephepha. Kepha isikhathi sesihambile, umoya uthule futhi abantu sebezijwayela kancane izinguquko, ngakho-ke kungaba yisikhathi esihle sokubheka amanye amagama emigwaqo yethu ’emisha’ – ukuthi ngobani laba bantu manje okubizwa ngabo imigwaqo yethu, futhi kungani kufanele ukuthi amagama abo aqoshwe emlandweni.
Kube nezinguquko ezimbalwa impela zamagama emigwaqo, ziningi kakhulu ongazibheka ngasikhathi sinye, ngakho-ke namuhla sizobheka igama elilodwa kuphela, sishiye inhloso ukuthi uvakashele izihloko ezifana nalesi ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Sicabange ukuthi sizoqala ngalo obonakala uhlala kalula ezingqondweni zabantu, okunguCowey Road, manje osesibizwa ngo-Problem Mkhize.
ULouis Problem Mkhize
ULouis Problem Mkhize wayeyi-trade unionist, eyilungu leMK futhi eyisikhulu se-SANDF.UMkhize wazalwa ngo-1940, kanti ushone ngo-2006 ngemuva kokuchitha impilo yakhe yonke esekhulile ekudingisweni njengelungu lephiko lwe-ANC, uMkhonto weSizwe (MK). Ujoyine iMK ngo-1962 waqeqeshwa ebusosheni eGibhithe naseRussia. Njengokhomanda uMkhize waya emazweni amaningi ase-Afrika, elwa neNingizimu Afrika ngo-1967 ngesikhathi somkhankaso kaWankie. Wabuyela eNingizimu Afrika ngaphambi nje kokhetho lokuqala lwentando yeningi ngo-Ephreli 1994, futhi wahlanganiswa noMbutho Wezokuvikela WaseNingizimu Afrika ngo-1995. Wanyuselwa esikhundleni sokuba ngu-colonel futhi wathunyelwa emsebenzini njengePhini Lezobunhloli ePietersburg. Wahlala kuleso sikhundla kwaze kwaba sekupheleni kuka-1996 lapho edluliselwa kwiNatal Command njengePhini Lomphathi Wezokuxhumana. Usebenze kulesi sikhundla kusuka ngoDisemba 1996 kuya ku-Agasti 2000. Ngo-2005 uMkhize wasuselwa ukwelashwa esuka kwi-SANDF, wadlula emhlabeni ngonyaka olandelayo ngo-2006.
Cofa lapha ukufunda okunye mayelana nempiloyeqhawe elalwelwa ubandlululo, ogama lakhe iningi lethu silazi kahle manje!
Izithombe ngezilokotho ze-photos-durban.blogspot.com.
Categories People, Places Tags Apartheid, Durban, eThekwini, eThekwini Municipality, No Longer At This Address, Problem Mkhize, Ukuqanjwa kabusha kwemigwaqo, ukushintshwa kwegama lomgwaqo